Wararka Maanta: Axad, Jan 13, 2019-Magac-yada Horjoogayaal ajaanib ah oo lagu dilay gobolka Shabeellaha Hoose
Ciidamada Danab iyo Ciidamada Mareykanka ayaa Howlgalka ka fuliyay degaanada Baladul Amiin iyo Hanti wadaag oo ka mid ah deegaannada hoostaga degmada Janaale ee G/Shabellada Hoose.
Saraakiil ka tirsan Kumaandooska Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in Howlgalada si wadajir ah looga fuliyay saldhigyo nabadiidka Al-shabaab ay ku lahayeen deegaannada Baladul Amiin iyo Hanti wadaag oo ka wada tirsan G/Shabellada Hoose.
Saraakiisha Danab ayaa tilmaamay in Saldhigyada laga fuliyay Howlgalka lagu bartilmaameysaday xubno sare oo ka tirsan nabadiidka Al-shabaab.
Ku dhawaad 85 dagaalyahan iyo horjoogayaal isugu jira Soomaali iyo Ajaanib ayaa lagu dilay howlgaladii ugu dambeeyey oo ay ciidamadu ka fuliyeen deegaano kaladuwan oo maleeshiayada Alshabaab saldhigyo ku lahaayeen.
Saraakiisha Kumaandooska Soomaaliya waxa ay Idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegeen magac-yada orjogayaasha lagu dilay weerarka iyo dalalka ay u dhasheen.
Horjogayaasha lagu dilay weerarka Howlgalka ayaa Magac-yadooda lagu kala sheegay Abuu Xamsa Bin Shaam kasoo jeeda dalka Masar kaasi oo Nabadiidka u qaabilsanaa Tababarada Maleyshiyada, Aweys Abu Xamza Almifsali oo heesta dhalashada dalka Tanzania , Abuu Bilaal Zubeyr ayaa heesta Dhalashada Monotariya ayaa hore u ahaa ku xigeenka Ibraahim Afgaan, Aadan Xaash Auu musiyaan ka soo jeeda dalka Suuriya iyo Feysal Bin hayaan ka soo jeeda dalka Yaman.
Saraakiisha Danab ayaa ugu dambeynti sheegay in goobta weerarka laga fuliyay ay eheed Saldhigyo lagu tababaro dagaalyahannada Al-shabaab.